​​Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa magaalaa kabajamtuu Makkaatti marii godhan - NuuralHudaa
Jilli Ulamaa Harargee bahaa, magaalaa Harar bakka qabeenyi Muslimaa itti haleelame daawwate
Miidhamtoota haleellaa magaalaa Mooxaatiif sagantaan deeggarsaa geggeeffamuufi
Masjidni Jamii’ul Khabiir kan magaalaa Arbaguuguu eebbifame
Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa Mootummaa Naannoo Amaaraa irratti himannaa kan banu tahuu beeksise
Balaan Kirkira lafaa Baha Turkiyaa keessatti muudate yoo xiqqaate lubbuu nama 20 galaafate
Dhibeen Vaayirasii Koronaa jedhamuun daddarbu guutuu addunyaa keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu ibsame
Bulchiinsi Falasxiin wixinee maqaa karoora nageenyaa jedhuun Ameerikaan qopheessite kan hin fudhanne tahuu beeksise
Manni Marii Ministeerotaa Manni Marii Dhimmoota Islaamaa labsiin akka hundeeffamu Murteesse
Godina Arsii Magaalaa Baleetti barattoonni Muslimaa Sababa uffannaa dararamaa jiran
Dhimma Hidha Laga Abbaay ilaalchisee ogeeyyoonni seeraa fi teeknikaa biyyoota sadeenii Kaartuum keessatti mari’ataa jiran
Home/Odeeyfannoo/​​Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa magaalaa kabajamtuu Makkaatti marii godhan
​​Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa magaalaa kabajamtuu Makkaatti marii godhan
5 14 Less than a minute
Marii guyyoota 2f geggeeffame kana irratti Prezidaantii Mana Marii Ulamaa’ota Ityoophiyaa Muftii Haaj Umar Idiriis, itti aanaa Prezidaantii Mana Marii Ulamaa’ota Ityoophiyaa Dr Jeylan Haaji Khadiir dabalatee, ulamaa’oolnni gurguddoon biyya Keenyaa biyya irraa, akkasumas biyyoota Addunyaa garagaraa irraa sirna Hajjii bara kanaaf gara Sa’udii imalan irratti hirmaatanii jiran.
Kayyoon marii kanaa guddaan Ulamaa’ota wal barsiisuufi hariiroo bareedduu isaan jiddutti umuuf yoo tahu, Prezidantiin Mana Marii Ulamaa’ota Ityoophiyaa Muftii Haaj Umar Idiriis ‘tokkummaa keessaan cimsaa! Ummata isin hordofuuf fakkeenya gaarii tahaa’ jechuun hirmaattotaaf dhaamsa dhaaman.
Itti aanaan Prezidantii Mana Marii Ulamaa’oota Ityoophiyaa Dr Jeylan Haaj Khadiir gama isaaniitiin ‘ummanni Muslimaa amma booda jechoota 2 ofirraa dhiisuu qaba! Jechoota Salafiyyaafi Suufiyyaa jeettu ofirraa fageessuu qaba. Maqaa Rabbiin ittiin nu yaame Muslimoota jannee of yaamuu qabna’ jedhan.
Waltajjiin akkasii kan Ulamaa’onni biyya keenyaa tokkummaan irratti argamanii irratti wal baratan kana dura kan qophaa’e hin beekne fi kan Jalqabaa yoo ta’u, hala bareedaan geggeeffame guyyaa har’a goolabame jira.
Hajjii_2019 Makkaa Marii Ulamaaotaa
yaasin muhammad says:
ulamaa’ota keenya rabbi nuuf haa tissue
Ulamaa ota Keenyaafi kan riqichaa guddaa nuuf buuse Kana rabbi nuuf gammachiisu A. AK ttii
zeyinaba kadir kiroo says:
maashaallah tabarakkallah maashaallah tabarakkallah rabbi umari nufi haa dheresuu Olommaotta tanya
Losha Aka bishaan lagaa says: